A Buddhist View on World Peace - 缅甸 泰国 斯里兰卡 印度 - 觉悟之路 上座部佛教 Theravada Buddhism - Powered by Discuz!
觉悟之路 上座部佛教 Theravada Buddhism»上座部资讯 › 上座部佛教资讯区 Theravada Information › 缅甸 泰国 斯里兰卡 印度 › A Buddhist View on World Peace
A Buddhist View on World Peace
发表于 2016-5-23 23:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Venerable Ashin Nyanissara (Sitagu/Thegon Sayadaw) 在 UN ESCAP Building Bangkok, Thailand · 泰国曼谷 ·
"ဗုဒ္ဓနေ့အခမ်းအနားမိန့်ခွန်း - မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်"
(Thailand, Vesak 2558/2016 -Speech)
"A Buddhist View on World Peace"
It is my great pleasure and honour to be here at this great occasion of the 13th United Nations Day of Vesak Celebration 2016 (BC 2559) hosted by Mahachulalongkornrajavidyalaya University (MCU), with the theme "the Buddhist Path to World Peace"
On this most sacred days of Vesak Commemorating the Birth, Enlightenment and Noble Demise of Gautama Buddha, I sincerely wish to share "A Buddhist View on World Peace"
The world today is seen asaplace where natural resources and human resources are abundant, yet it still lacks something that contributes towards maintaining peace and stability. It is nothing but the spirit of fellowship, and the lack of which is the major cause of war. Apart from military conflicts, there are of course many other kinds of conflict such as racial, political, economic and even religious conflicts, most of which are caused by the lack of the spirit of fellowship.
Inaconflict each side has its own conceit. Both parties get used to blaming the other while claiming that they are right. They even use the name of religion to justify their actions, without truly following the teachings of their respective religions or even trying to understand it’s essence. It is evident that there would prevail peace in the world if people are calm and serene under the peaceful guidance of religions.
Following the First World War, there established many international organizations. Many authors put their focus on the subject of internationalism, and idealistic workers, hoping forabetter future, started many international movements, but, all without exception, failed to maintain peace. Why? Firstly, they had not, for one reason or another, been able to carry out their plans. Secondly, they received insufficient support from the public. And thirdly, most of them had dealt only with the purely external, material adjustments, paying too much attention to the material side of life and too little to the spiritual side. The two sides are interdependent and interrelated, and the importance of both should be recognized.
Then came the Second World War, unparalleled in history for destruction. Unfortunately, since the end of the Second World War, the world has seen various states of chaos, conflicts and fighting. There has been instability in almost every part of the world, with devoid of peace and real happiness. And once again idealistic workers have tried to introduce new international organizations. But they are never successful unless the leaders and their followers carry out their plans inaspirit of world fellowship. Without this, there will probably be further wars, even more dreadful than the last.
The peace which we all desire is not the God's task to perform. It can only come about asaresult ofareconstruction of thought, feeling and action by means of the spirit of fellowship, and such is the duty of all mankind.
The world we live can be compared toaglobal village and by making use of its wealth, strength and ability collectively, we can abolish poverty, unemployment, conflicts and other problems the world people are currently facing. To achieve success in solving global problems, it is vital that people need to learn to understand each other better by drawing closer and act together as members of one family, regardless of race, caste and religion. All religions teach their followers "what to do" to live in peace and happiness, and "what not to do" to stay away from misery, suffering and unhappiness. Buddhism teaches that it is no need to appeal to any external authority in the form ofadeity for people's suffering, but only to the naturel desire of the human heart.
The real spirit of fellowship which is lacking in the world today can be promoted only through religion. Religion is an education of the heart withaview to refining our nature and elevating us in the scale of human beings. It is not merely theory but practice, and the heart, like the body, becomes healthy and strong by practical exercise. No doctrine merely held in the mind as an intellectual belief has any driving force nor value unless and until it is applied. The Buddha said, "A beautiful thought or word which is not followed byacorresponding action is likeabright flower with no scent. Such will bear no fruit."
Practice of the moral life is the very core and essence of religion, for it is action and not speculation, practice and not theory that count in life. The will to do, followed by the doing, is the actual virtue. The will itself does not count much unless it is fulfilled. Thus to put one's high ideas and concepts into practice is religion in the best sense. Religion is obviously not confined to any one country or any particular nation or race, it is universal. And it is certainly not nationalism nor another form of caste system but founded onawider basis.
The world has found itself as one body, yet physical unity and economic interdependence, is not by itself sufficient to createaunited family. For this, we requireahuman consciousness of community, In other words, it is the spirit of fellowship. To have this spirit of fellowship we must realize the oneness of all life, and understand that we are one family.
According to Buddhism life isamighty wheel of perpetual motion, and this wheel contains within it numberless smaller wheels corresponding to the lives of individual men, withapattern of its own. The great wheel and the smaller wheels, the whole world and individual men, are intimately and indissolubly linked. The whole human family is so closely related that every unit is dependent on the others for its growth and development. Men, being in need of each other, should learn to love each other and bear one another's burdens. This mutual dependence isaperpetual call on humanity.
Science proves that the fundamental structure of the human mind is uniform in all races, but there are differences due to historical circumstances and stages of development. Without recognition of the oneness of the world in all its aspects, spiritual as well as social, economic as well as political, there will never be peace. A genuine spirit of world fellowship is the only logical basis of all true and high civilization, and of world peace.
ယနေ့ကမ္ဘာကြီးသည် ငွေကြေး၊ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းနှင့် အသိဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာတို့ ချို့တဲ့မှုမရှိ ပြည့်စုံနေသော်ငြားလည်း လူသားအချင်းချင်း မိသားစုစိတ်ဓာတ်၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်စိတ်ဓာတ်နှင့် ရဲဘော်ရဲဖက် စိတ်ဓာတ်များ မပြည့်စုံ ချို့တဲ့လျက်ရှိသည်။ ဤသည်ကား စစ်ပွဲများဖြစ်ပွားရသည့် ပဓာနအကြောင်း တရားဖြစ်သည်သာမက အသင်း အဖွဲ့တစ်ခုနှင့်တစ်ခု၊ တစ်နိုင်ငံနှင့် တစ်နိုင်ငံအကြား လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ၊ လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခ၊ နိုင်ငံရေး ပဋိပက္ခ၊ စီးပွားရေးပဋိပက္ခ၊ ဘာသာရေးပဋိပက္ခ စသည့်ပဋိပက္ခ မှန်သမျှ၏ အခြေခံအကြောင်းရင်းပေတည်း။
လူတစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး၊ တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ ပဋိပက္ခဖြစ်ရခြင်းမှာ နှစ်ဖက်စလုံး၌ မိမိကိုယ်ကိုယ်သာ အထင်ကြီးပြီး၊ တစ်ဘက်သားကို အထင်အမြင်သေးမှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် “ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့်ကမ္ဘာလောကကြီးပေါ်ထွန်းလာရေး၊ ခေတ်နောက်ကျန် နေသူများ၏ ဘ၀ကိုမြှင့်တင်ပေးရေး၊ အရှေ့အာရှဒေသ၏ သာတူညီမျှ ကောင်းစားရေး” စသည့် စကားလုံးလှလှများကို အပေါ်ယံရှေ့တန်းတင်လျက် မိမိကိုယ်မိမိ အထင်ကြီးမှုကို မပေါ်လွင်အောင် ဖုံးဖိကာ တစ်ဘက်သားကို အပြစ်တင်ရှုတ်ချတတ် ကြသည်။ ထို့အပြင် မိမိတို့၏ အယူအဆနှင့်လုပ်ရပ်များ မှန်ကန်ကြောင်းကို ပြသရန် အတွက် ဘာသာရေးကို ခုတုံးလုပ် အကာကွယ်ယူလေ့ရှိကြသည်။ သို့ရာတွင် ဘုရားရှင်၏ အဆုံးအမနှင့်အညီ အမှန်တကယ် ကျင့်ကြံနေထိုင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ဘုရားရှင်၏ အဆုံးအမ ကို မိမိအကျိုးအတွက် လိုအပ်သလိုကိုးကား အသုံးချခြင်း မျှသာဖြစ်သည်။ ပဋိပက္ခကို ဖန်တီးနေသူများက လောကတွင် ဘုရားတစ်ဆူသာရှိသည်ဟု ကြွေးကြော် တတ်ကြသည်။ အကယ်၍ လောကတွင်ဘုရားတစ်ဆူသာ ရှိသည်ဆိုပါက ထိုဘုရားရှင်၏ အဆုံးအမ အောက်၌ အချင်းချင်း ရန်မပြုကြဘဲ မိသားစုဝင်များပမာ တစ်စိတ်တစ်ဝမ်းတည်း ချစ်ချစ်ခင်ခင် နေထိုင်သင့်ကြပေသည်။
ပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးအပြီးနောက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းပေါင်းများစွာ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံတကာပေါင်းစည်းရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အားပေးထောက်ခံ ရေးသားသူများစွာရှိခဲ့ပြီး အေးချမ်းသာယာသည့် အနာဂတ်ပေါ်ထွန်းရေးကို မျှော်မှန်းကာ နိုင်ငံတကာလှုပ်ရှားမှုများစွာကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသော်လည်း ကမ္ဘာ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို အမှန်တကယ် ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ အကြောင်းမှာ ချမှတ်ထားသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်များကို အကြောင်းတစ်မျိုးမျိုးကြောင့် လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမရှိခဲ့ခြင်း၊ ပြည်သူ လူထု၏ ထောက်ခံအားပေးမှု အပြည့်အ၀မရရှိခဲ့ခြင်း၊ အပေါ်ယံအလွှာဖြစ်သည့် ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာကိုသာ ဦးစားပေးပြီး အတွင်းပိုင်းအနှစ်သာရဖြစ်သည့် စိတ်ဓာတ်ရေးရာပိုင်းကို အလေးပေးမှုနည်းပါး ခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေသည်။ အမှန်စင်စစ် ရုပ်ပိုင်းနှင့် စိတ်ပိုင်း ကဏ္ဍနှစ်ရပ်သည် အချင်းချင်းအပြန်အလှန် ဆက်နွယ်မှီခိုလျက်ရှိရာ တစ်ဖက်စောင်းနင်းမဖြစ်စေဘဲ ဟန်ချက်ညီညီ ထိန်းညှိဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်ပါသည်။
ယင်းသို့ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးကို ကြွေးကြော်နေရင်းနှင့်ပင် သမိုင်းတစ်လျှောက် လူသားတို့၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ် အများဆုံးသေကြေပျက်စီးခဲ့ရသည့် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ ကမ္ဘာကြီးတွင် ငြိမ်းချမ်းမှု၊ ပျော်ရွှင်မှုများ ဆိတ်သုဉ်းပြီး တည်ငြိမ်မှု ကင်းမဲ့ကာ ပရမ်းပတာအခြေအနေသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ယင်းအချိန်တွင် အတွေးအခေါ် သမားများ၊ ကထိကများ၊ စာရေးဆရာများက နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းရန် ဟောပြောရေးသားမှုများ လုပ်ဆောင်လာကြပြန်သည်။ သို့ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ ကမ်္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များနှင့် ၎င်းတို့၏ နောက်လိုက်များအနေဖြင့် စိတ်တူကိုယ်မျှ စုစည်း ညီညွှတ်စွာ စုပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြမှသာ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးကို အမှန်တကယ် ဖော်ဆောင် နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့မဟုတ်ပါက ၎င်းတို့၏ ကြိုးပမ်းချက်များ မည်သည့်အခါတွင်မှ အောင်မြင်မည်မဟုတ်ဘဲ ယခင့်ယခင် စစ်ပွဲများထက် ပိုမိုပြင်းထန် ကြောက်မက်ဖွယ် ကောင်းသည့် စစ်ပွဲများသာ ထပ်မံ ဖြစ်ပွားလာနိုင်ပါသည်။
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများအကြားနှင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးတို့အကြား ကျွန်ုပ်တို့ အမှန်တကယ် လိုလားသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာဘုရားရှင်တို့၏ တန်ခိုးအာနုဘော်ဖြင့် ဖန်တီးယူရမည့်အရာမဟုတ်။ ကမ်္ဘာ့လူသားအားလုံးတို့က စိတ်တူ ကိုယ်မျှ ညီရင်းအစ်ကို မောင်ရင်းနှစ်မစိတ်ဓာတ်ကို အခြေခံလျက် မိမိတို့၏ အတွေးအခေါ်၊ ခံစားချက်နှင့် လုပ်ရပ်တို့ကို ပြန်လည်ဆင်ခြင်ညှိနှိုင်း တည်ဆောက်ခြင်း ဖြင့်သာ ရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ယနေ့ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများအားလုံးနီးပါး ရင်ဆိုင်နေရသည့် ဆင်းရဲကြပ်တည်းမှုနှင့်၊ အလုပ်လက်မဲ့ ပြဿနာအပါအ၀င် အခက်အခဲ မျိုးစုံနှင့် အကြမ်းဖက်မှုများကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ၏ ငွေကြေးအင်အားကို အသုံးပြုလျက် စုပေါင်းဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းရှိပါသည်။ ကမ္ဘာ့လူသားအချင်းချင်း တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးပိုမိုနားလည်မှုရှိရှိ နီးကပ်စွာဆက်ဆံခြင်းဖြင့် အရေးတကြီး ဦးစားပေးဖြေရှင်းရမည့် ကိစ်္စရပ်များကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက် သွားနိုင် ပါသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ သိပ်္ပံပညာရှင်များ၊ ကဗျာဆရာများ၊ အနုပညာရှင်များအားလုံး၏ စုစည်းညီညွတ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် လူသားထု တစ်ရပ်လုံးကို အကျိုးပြုသည့် မွန်မြတ်သည့်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာ၌ အရေးပါသည့် အစွမ်းသတိ်္တနှင့် အင်အားတို့ကို ရရှိဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ထို့အပြင် ဘာသာဝင်အသီးသီးအနေဖြင့် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မိသားစုဝင်များသဖွယ် ရင်းနှီးချစ်ခင်စွာဖြင့် အတူလက်တွဲ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဆိုပါက ယနေ့ကမ္ဘာကြီးကို ပိုမိုအေးချမ်းပျော်ရွှင်ဖွယ် ဖန်တီးပေး နိုင်မည့် စိတ်ဓာတ်ခွန်အားကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
လူသားတို့၏ ဆင်းရဲဒုက္ခမှန်သမျှသည် သက်ဆိုင်ရာဘုရားရှင်တို့၏ အမျက်တော်ရှ ဒဏ်ခတ်ခြင်းမဟုတ်မူဘဲ လူသားတို့အနေဖြင့် မိမိ၏ ပင်ကိုယ်သဘာဝ စိတ်အခြေအနေ နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တို့ကို မသိမြင်ခြင်းကြောင့်သာဖြစ်ပါသည်။ ထိုထိုဆင်းရဲဒုက္ခများ ပပျောက်စေရေးအတွက် ပြင်ပတန်ခိုးရှင်၊ ဖန်ဆင်းရှင်တစ်ဦးဦးကို တောင်းပန်အသနား ခံမည့်အစား မိမိနှလုံးသား၏ လိုလားတောင့်တချက်ကိုသာ အမှန်အတိုင်းရှုမြင်သုံးသပ်ရန် ဗုဒ်္ဓဘာသာက ညွှန်ပြပါသည်။ သို့ဖြစ်၍တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ပျင်းရိထိုင်းမှိုင်းမှုတို့သည် မိမိတို့၏အသင်းအဖွဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းကို ပျက်စီးစေကြောင်း သိရှိနားလည်လာသူတစ်ဦးသည် မိမိ၏အကျိုးစီးပွားကို ရွက်ဆောင်ရာ၌ သူတစ်ပါးကို ထိခိုက်နစ်နာစေမည့် လုပ်ရပ်မှန်သမျှကို ရှောင်ရှား နိုင်အောင် ကြိုးစားလာပေလိမ့်မည်။
ယနေ့ကမ္ဘာကြီးတွင် လိုအပ်နေသည့် ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ဓာတ် ညီရင်းအစ်ကို မောင်ရင်းနှစ်မစိတ်ဓာတ်ကို ကိုးကွယ်ရာဘာသာတရားကသာလျှင် ဖြည့်ဆည်းမြှင့်တင် ပေးနိုင်သည်။ ကိုးကွယ်ရာဘာသာတရားသည်သာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပင်ကိုယ်သဘာဝဗီဇနှင့် လူသားပီသ သည့် အရည်အသွေး၊ အဆင့်အတန်းကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်မည့် နှလုံးသားကို သွန်သင်ပဲ့ပြင် ပေးနိုင်သည်။ ဘာသာတရားဟူသည် စာတွေ့သဘောမျှသာမဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်နှလုံးကို ခန္ဓာကိုယ်ကဲ့သို့ ကြံ့ခိုင်သန်မာလာအောင် ပြုပြင်ပေးနိုင်သည့် လက်တွေ့ကျင့်စဉ်လည်းဖြစ်သည်။ လူသားတို့၏ အသိဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မြှင့်တင် ပေးနိုင်သည့် ဘာသာတရားအဆုံးအမ သြ၀ါဒမှန်သမျှသည် လက်တွေ့ကျင့်စဉ် မပါရှိပါက တန်ဖိုးမရှိ၊ အချည်းနှီးသာတည်း။ သို့အတွက် ဗုဒ္ဓရှင်တော်က လှပသည့် စိတ်အကြံအစည်နှင့် စကားလုံးတို့သည် လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်စရာမရှိပါက အရောင်အသွေး တောက်ပသော်လည်း မွှေးရနံ့ကင်းသည့် ပန်းပွင့်နှင့်တူပြီး အသီးမသီးသည့် သစ်ပင်နှင့် တူကြောင်း မိန့်မြွက်ခဲ့ဘူးသည်။
ကိုးကွယ်ရာဘာသာတရားဟူသည် စိတ်ကူးသက်သက်မျှ ကြံစည်တွေးတော မှန်းဆယူရခြင်းမဟုတ်၊ လက်တွေ့ကျင့်သုံးတည်ဆောက်ခြင်းသည်သာ ဘာသာတရား၏ အနှစ်သာရစစ်စစ်ဖြစ်သည်။ လက်တွေ့မပါသည့် စိတ်ကူးဆန္ဒသည် အနှစ်ကင်းမဲ့ပြီး လက်တွေ့ကျင့်သုံးလိုသည့် စိတ်ဆန္ဒနှင့် ယင်းဆန္ဒအတိုင်း လက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်း သည်သာ တကယ့်တန်ဖိုးဖြစ်သည်။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ စိတ်ကူးအကြံဉာဏ်နှင့် အတွေးအခေါ် အယူအဆတို့ကို လက်တွေ့အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ခြင်းသည်သာ အနှစ်သာရပြည့်ဝသည့် ဘာသာတရားမည်ပေ၏။ ဘာသာတရားသည် လူမျိုးတစ်မျိုး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၊ မျိုးချစ်စိတ်နှင့် အမျိုးဇာတ်တစ်ခုစီအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိဘဲ အမျိုးဘာသာမရွေး လူသားတိုင်းအတွက် ဘုံဆိုင်ဖြစ်သည်။
ယနေ့ကမ္ဘာကြီးသည် လူ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခု၊ မိသားစုတစ်ခု၊ အဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ်နှင့်တူ၏။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်သန်မာမှု၊ စီးပွားရေးအရ အချင်းချင်း အပြန်အလှန် အမှီသဟဲပြုရမှုတို့သည် ယင်းအဖွဲ့အစည်း တည်တံ့ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုအတွက် အရေးပါသော်ငြားလည်း ယင်းတို့သက်သက်မျှဖြင့် စုစည်း ညီညွတ်သည့် မိသားစု အသင်းအဖွဲ့ကို မတည်ဆောက်နိုင်ပေ။ မိသားစုဝင် အချင်းချင်း၊ အသင်းအဖွဲ့ဝင် အချင်းချင်း မိသားစုစိတ်ဓာတ်ရှိရှိဖြင့် မိမိအသိုင်းအ၀ိုင်း၏ အကျိုး စီးပွားကို အလေးပေး လိုသည့် စိတ်ဓာတ်ရှိရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ မိမိတို့အနေဖြင့် မိသားစုကြီးတစ်ခုအတွင်းရှိ မိသားစုဝင်များဖြစ်သည်ဟူသော အသိတရား ရှိမှသာလျှင် ယင်းစိတ်ဓာတ်နှင့် ပြည့်စုံပါလိမ့်မည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာအဆိုအရ ဘ၀ဟူသည် အရှိန်ပြင်းပြင်းဖြင့် အဆက်မပြတ် လည်ပတ် နေသည့် ဘီးကြီးတစ်ဘီးနှင့်တူပါသည်။ ၎င်းဘီးထဲတွင် လူတစ်ဦးစီ၏ စိတ်အသွင် သဏ္ဍာန်ကို လိုက်၍ မတူသည့်ဘီးငယ်ပေါင်းများစွာ ပါဝင်လျက်ရှိပါသည်။ ကမ္ဘာ လောကကြီးနှင့် တူသည့် ဘီးကြီးနှင့် လူသားတစ်ဦးချင်းစီနှင့်တူသည့် ဘီးငယ်များစွာ တို့သည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု နီးနီးစပ်စပ် ချိတ်ဆက်လျက်ရှိသည်။ ထိုနည်းတူ ကမ္ဘာမိသားစုကြီးတွင် ပါဝင်နေသည့် မျိုးနွယ်စုအစိတ်အပိုင်း အသီးသီးသည်လည်း တစ်ခုနှင့်တစ်ခု နီးကပ်စွာ ချိတ်ဆက်နေပြီး လူတစ်ဦး၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အခြားတစ်ဦးပေါ်တွင် အမှီသဟဲပြုနေရပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြောဆို၊ လုပ်ကိုင်၊ ကြံစည်မှုမှန်သမျှတို့သည်လည်းကောင်း၊ သူတစ်ပါး၏ လုပ်ရပ်အပေါ်တုံ့ပြန်မှု မှန်သမျှ တို့သည် လည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာမိသားစု အသိုင်းအ၀ိုင်းကြီးအတွက် အကျိုး သက်ရောက်မှု ဖြစ်စေပါသည်။ လူတစ်ဦးအနေဖြင့် အကြောင်းတစ်မျိုးမျိုးအတွက် တစ်ချိန်ချိန်တွင် အခြားသူတစ်ဦး၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုကို လိုအပ်သည်ဖြစ်ရာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မေတ္တာ ရှေ့ထားလျက် သည်းခံခွင့်လွှတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားဖို့လိုအပ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ကင်းကွာနေထိုင်၍မရသည့် ကျွန်ုပ်တို့လူသားထုတစ်ရပ်လုံးအနေဖြင့် အချင်းချင်း အစဉ်အမြဲ အပြန်အလှန် မှီခိုဆက်ဆံ နေထိုင်သွားကြရန် အရေးကြီးလှ ပေသည်။
လူသားတို့၏ စိတ်သဏ္ဍာန်သည် သမိုင်းကြောင်းအခြေအနေနှင့် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်အရ ကွာခြားမှုရှိနိုင်သော်လည်း အခြေခံအားဖြင့် တူညီသည့်ဖွဲ့စည်းမှု ရှိသည်ဟု သိပ်္ပံပညာက သက်သေပြခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်ရာ၊ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေးရာကဏ္ဍအသီးသီး၌ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး၊ တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့တူညီသည့် ဦးတည်ချက် ဖြင့် နားလည်မှုရှိရှိ အတူလက်တွဲ လျှောက်လှမ်းနိုင်ခြင်းမရှိပါက ကမ္ဘာကြီးတွင် ငြိမ်းချမ်းမှု မရှိနိုင်ဘဲ အချင်းချင်းစိတ်တူကိုယ်မျှ တစ်သဘောတည်း၊ တစ်သားတည်းဖြစ်ပြီး အတူလက်တွဲ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းသည်သာ ကမ်္ဘာကြီး၏ စစ်မှန်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် မြင့်မားသည့် လူမှုတိုးတက်မှုအတွက် ပဓာနကျသည့် အခြေခံ အကြောင်းတရားဖြစ်ပေသည်။
GMT+8, 2020-10-20 20:13 , Processed in 0.180267 second(s), 23 queries .